EX - ABSDF: July 2014
စစ်အာဏာရှင်သာဂိကြီးရဲ့ ပုဂံညောင်ဦးခရီးစဉ်မှာ အဲဒီအချိန်က နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူက ထိုင်ကန်တော့ခဲ့ဖူးပါတယ်၊ ညဘက် နိုင်ငံတော်ဧည့်ရိပ်သာကြီးမှာ သာဂိကြီးကအတူပါလာတဲ့ ဝန်ကြီးတွေနဲ့ထိုင်ပြီး စကားစမြည်ပြောနေချိန်မှာပေါ့၊ အဲဒီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ဆက်တီပေါ် ကနေ မြ်းပြင်ပေါ်ကိုဆင်းပြီး သာဂိကြီးကို လက်အုပ်ချီလိုက်တယ်၊ Read more »
Htay Oung လက်ရှိ အီရတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဟာ ဘီစီ(၃၅၀၀)ခန့်က ဆူမားရီယန်း လူမျိုးတို့နေ ထိုင်ရာဒေသပါ။ သူတို့ဟာ လူ့ယဉ်ကျေးမှု့ရဲ့အစ စာအရေးအသားကို စတင်တီထွင် သူများဖြစ်ပါတယ်။ အဆင့်အတန်းမြင့်မားပြီး စိတ်ဝင် စားစရာ သိမ်မွေ့လေးနက်လှတဲ့ ဒဏ္ဍာရီ၊ ပုံပြင်၊ မော်ကွန်း၊ ကဗျာများ၊ အံ့မခန်း ဗိသုကာလက်ရာ အဆောက် အအုံများ အလွန်ပေါများပါတယ်။ Read more »
ဦးဆန်းဆင့် ကျန်းမာရေးအာမခံ တရားရုံးက ပယ်ချ (ရုပ်/သံ) အသက် ၅ နှစ်အောက် ၁.၆ သန်း မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဟု ကုလပြော
အပျိုရည်အဖျက်ခံရတဲ့ တောင်သမန် Shwe Eaim Si
ကျွန်တော်တို့ မန္တလေးမြို့ကြီးက မင်းနေပြည်တော် ဖြစ်ခဲ့တာ နဲ့အညီ လည်စရာ ပတ်စရာ သမိုင်း ၀င်နေရာတွေဟာ လွန်စွာမှ ပေါများပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာမှ မြန်မာသိ ကမ္ဘာသိ သမိုင်းဝင် ရှေးဟောင်း ဦးပိန် တံတားကြီးလည်း တစ်ခု အပါအ၀င်ပါပဲ။ မန်းလေးကို လာရောက် လည်ပတ်ကြတဲ့သူတိုင်း မသွားမဖြစ် သွားကြတဲ့
နေရာ တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
စကားပြန်လုပ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ အမှတ်မထင် ဆုံဖြစ်ကြပါတယ်။ မတွေ့ရတာကြာပြီမို့ စကားတွေ ဖောင်ဖွဲ့နေမိကြတယ်။ သူငယ်ချင်းက
သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်တာတွေကိုပြောရင်း နိုင်ငံရေးနဲ့ စီးပွားရေး ဆက်စပ်မှုရှိနေတဲ့အကြောင်း စကားရောက်သွားကြတယ်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဟာ အေးချမ်း တည်ငြိမ်လာတာနဲ့အမျှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ဦးမော့လာပြီး တိုးတက်လာမှာ အမှန်ပါပဲ။
Nyo Tun with Khun Deerum ချိုးစားစနစ်ကို
သူတို့ ဘယ်လုိုအကြောင်းပြမလဲဆို အားလုံး ပါဝင်နိုင်အောင်လို့ (all-inclusive) ဆိုပြီး အကြောင်းပြပါလိမ့်မယ် ။ အချိုးကျ ကိုယ်စားပြုရေး
(PR)၊ အားလုံးပါဝင်စေရမယ့် ဒီမိုကရေစီ ဘာညာ၊ နာမည် ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေကို အထင်မကြီးကြပါနဲ့။ သည် အာဏာရူးတွေ အရူးချီးပန်း လျှောက်ပြောတာမှန်သမျှကို ကျနော်တို့ လိုက်ငြင်းနေဖို့ အချိန်သိပ်မရှိပါ။ အဓိကအချက်ကိုပဲ ပြောပါမည်။ PR စနစ်ဆိုတာ ချိုးစားချိုးကျွေးလူတွေ လွှတ်တော်ထဲဝင်၊ ချိုးစားချိုးကျွေးလူတွေနဲ့ နိုင်ငံရေးကို လေဖြတ်ပြီး သေနေအောင် ကြံစည်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ လူပေါတွေ တလှေကြီးနဲ့ ဘာအရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်မှ မယ်မယ်ရရ ထွက်မလာအောင် လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာ။ တိုတိုပြောရင် သူတို့ရဲ့ လက်တွေ့ရည်ရွယ်ချက်က "လက်ရှိအခြေအနေ"ကို အချိန်ဆွဲထားဖို့ပဲ။
အယ်လ်ဂျီးရီးယား လေယာဉ်ပျက်က Black Box တစ်ခု ထပ်တွေ့ ယာယီအပစ်ရပ်ရေး အစ္စရေးလ်သက်တမ်းတိုး မိုးရွာသည့်ကြားမှ သာကေတ(၁)ဈေး မီးလောင်
ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေ ရဲ့
သန္တာန်မှာ ပျော်ရွှင်လိုစိတ် ၊ အောင်မြင်လိုစိတ် ၊ ရယူလိုစိတ် စတဲ့ လောဘတွေရှိသလို ၊ ထိခိုက်ခံရတဲ့ခါ နာကျင် မှု ၊ ခံပြင်းမှု ၊ အလိုမကျမှု စတဲ့ ဒေါသတွေ ရှိလည်းရှိကြတယ် ။ လူ့သမိုင်း တိုးတက်လာတာနဲ့ အ မျှ လူသားတွေ ဟာ အုပ်စုတွေ ဖွဲ့ပြီး နေထိုင်ခဲ့ကြ တယ် ။ တစ်ဦးချင်း ၊ တစ်ယောက်ချင်း ၊ အုပ်စုချင်း ၊ အဖွဲ့ချင်း ကာယအား ၊ ဥာဏအားတွေ ယှဉ်ပြိုင် ၊ ရင်ဆိုင် ၊ အနိုင်ကျဲ ကြရင်းနဲ့ လူ့သမိုင်းတွေကိုတည်ဆောက်ခဲ့ကြတယ် ။
သည်ဇာတ်လမ်း၏ အစမှာ ၂၀၁၂ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ရက်နေ့ဖြစ်သည်။ အမေရိကားသို့ ကျွန်တော် ခေတ္တ ရောက်နေချိန်မှာ ဆန်ဖရန် စစ်စကိုမြို့ အနီးရှိ စတန်းဖို့ဒ် တက္ကသိုလ်သို့ လည်ခွင့် ကြုံခဲ့သည်။ ကျွန်တော် ထောင်ထဲမှာ ရှိနေစဉ်က လယ်ရီဒိုင်းမွန်း ရေးသားသည့် ဒီမိုကရေစီ စိတ်ထား ဆိုသော စာအုပ်ကို ဖတ်ဖူးသည်။ နှစ်ခြိုက်ဖူး၏။ သည်အကြောင်းကို အမေရိကန်နိုင်ငံ ၀ါရှင်တန်မှာ ရှိနေစဉ် NED မှာ ပြုလုပ်သည့် ဟောပြောပွဲ၌ ထည့်ပြောမိလိုက်သည်။
လက်နက်ကိုင်တဦး သေနတ်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဒေသခံလူငယ်တဦးသေဆုံး (ရုပ်/သံ) စဉ့်ကူးမြို့နယ်ထဲ သိမ်းဆည်းခံလယ်မြေတွေ ပြန်ရရေး ဆက်လက်တောင်းဆို (ရုပ်/သံ) သိမ်းဆည်းလယ်ယာဧက ၂သောင်းခွဲကျော် ပြန်ပေးရေး ဆင်ပေါင်ဝဲမှာ ဆန္ဒပြ
ထက် အပြန်တရာပိုအရေးကြီးတဲ့ PI” (PR = Proportional Representation = အချိုးကျ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ခြင်း PI = Popular Initiative = ပြည်သူ့ဦးဆောင်တောင်းဆိုမှု) .
အဘိုးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း (ကွယ်လွန်ခြင်းနှစ်-၅၀ပြည့် အမှတ်တရ)
မွေးသက္ကရာဇ် ၁၈၇၆-၁၉၆၄ ငယ်အမည် မောင်လွန်း ရရှိခဲ့သည့်ဘွဲ့နှင့် ဆုတံဆိပ်များ အလင်္ကာကျော်စွာဘွဲ့၊ စတာလင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆု(ဆိုဗီယက်)၊ ဒေါက်တာဘွဲ့(အရှေ့ဂျာမဏီ)
မြန်မာစာပေပညာရှင်၊ ကဗျာဆရာ၊ ရာဇဝင်(သမိုင်း)ဆရာ၊ နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးနှင့်
လွတ်လပ်ရေး တိုက်ပွဲ ဝင် မျိုးချစ်စာရေးဆရာ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးပြုသမား
အဖြစ်ထင်ရှား ကျော်ကြားသူဖြစ်သည်။ Read more »
Kyaw Naing's photo. ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တောမှိုင်းကို ပြည်သူ့စာဆိုကြီး၊ မျိုးချစ်စာဆိုကြီး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖခင်ကြီး စသည်ဖြင့် သူ့ခေတ်သူ့အခါ ပြည်သူအများက အသိအမှတ် ပြုခဲ့ကြသည်။ ဆရာကြီးကို မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၃၇ ခုနှစ်တွင်
ဖွားမြင်ရာ သီပေါဘုရင် ကိုယ့်ထီး ကိုယ့်နန်းနှင့် ရှိစဉ်က ဖြစ်သည်။ Read more »
အင်္ဂလိပ်ခေတ်က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကုလား – ဗမာ အဓိကရုဏ်းအကြောင်းကို ကျနော်ငယ်ငယ်က အမေ ပြောပြလို့ ကြားဖူးတယ်။
“ရန်ကုန်မှာတော့ ဗမာတွေနှင့်တန်းတူ သူတို့လူမျိုးတွေရှိတော့ ရိုက်ကြနှက်ကြ၊ မီးရှို့ကြတာမျိုး ရှိမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် တို့မန္တလေးမှာက အဲဒါမျိုး မရှိဘူးတဲ့” အဲ့လို အမေကပြောလို့ ကျနော်က သိပ်နားမ လည်တော့ ပြန်မေးရတယ်၊ အမေက ပြန်ရှင်းပြတယ်။
အမျိုးသား (၁)ဦး လျှပ်စစ်မီးချောင်း လဲလှယ်တပ်ဆင်စဉ် ဓါတ်လိုက်သေဆုံး
ထားဝယ်ဒေသ မြင်းခံဘော်ရွာတွင် သတ္တုတူးဖော်ရန် ဒေသခံများကန့်ကွက်
အမျိုးသားပညာရေး ဥပဒေကြမ်းကို ကျောက်ဆည် ကျောင်းသားများ ဆန္ဒပြမည်
တာဝန်အရဆောင်ရွက်သည့် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအား ဓါးဖြင့်ခုတ်သူကို အရေးယူထား
အရှိန်မထိန်းနိုင်သောယာဉ် လမ်းယာဘက်သို့ ထိုးကျတိမ်းမှောက်သဖြင့် (၁၅)ဦး ဒဏ်ရာရ
ပညာရေးကို တပိုင်းတစနဲ့ ကျောခိုင်းသွားတဲ့ အမျိုးသမီးငယ်အကြောင်း ကျမတို့ ဘာသိထားကြလဲ…
နိုင်ငံ့ဂုဏ်ကို ပညာရေးနဲ့ဆောင်ခဲ့တဲ့ မသန်စွမ်းကျောင်းသူ မစုပုံချစ် – မေးမြန်းချက်
ရန်ကင်းလူသတ်မှူမှ တရားခံအား ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ကျူးလွန်သည်မှာ ထင်ရှား၍ သေဒဏ်ချမှတ်
အချင်းချင်း စိတ်ကတောက်ကဆနဲ့ ပြဿ နာတွေ တက်ကြရင် ဘယ်လို ပြန်အဆင်ပြေအောင် လုပ်ကြမလဲ???
စလင်းတွင် ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းပါးပြို ရွာခုနစ်ရွာမှ အိမ်ခြေ ၆၀၀ ကျော်ရွှေ့ပြောင်း
မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်း ရန်ကုန်က ရဲဘော်ဟောင်းတယောက်က ကိုမြဟန် (တပ်ရင်း ၂၁၆) ကျန်းမာရေးကိစ္စ အကူအညီလိုတယ်ဆိုလို့ ကျနော့် FB မှာ တင်ရင်း ရဲဘော်ဟောင်း တချို့ ကိုပါ tag လုပ်လိုက်ပါတယ်။ ကိုမြဟန်အကြောင်းကို ကျနော်မြန်မာလိုရေးပြီး ABSDF ဆိုတဲ့ စာလုံး ၅ လုံးဘဲ ဗြိတိသျှ လိုပါသွားတယ်။ ခနနေတော့ ထိုင်းမိတ်ဆွေ အမျိုးသမီးတဦးက comment မှာ မေးလာ တယ် “သိချင်လို့ပါ၊ ABSDF ဘာဖြစ်တာလဲတဲ့”၊ ဒါနဲ့ ကျနော်လည်း ငါတို့ရဲဘော်ဟောင်း တယောက်ပါ ။ ကျန်းမာရေးကိစ္စအကူအညီလိုနေလို့၊ အပြင်ကရဲဘော်ဟောင်းတွေ
သိ အောင် တင်ထားတာပါ လို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ ဒါနဲ့ဘဲ သူက “ ဒီမိုကရေစီ ခရီးရှည်ကြီးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ ရဲဘော်အဖြစ်၊ ငါတတ်နိုင်သလောက် ကူညီ ပါရစေ” တဲ့။ သူ့ comment နဲ့ နာမည်တော့ ရေးမပြတော့ဘူး၊ ကျနော် တင်ထားတဲ့ post မှာရှိတယ် (တော်ကြာ သူ့နာမည်နဲ့ comment ကိုတွေ့သွားပြီး၊ ဘာတွေ ရေးနေတာလဲ မေးမှာစိုးလို့ )
သခင်ဗဟိန်းအား တပ်မတော်ကို ဦးစီးခေါင်းဆောင်နေရာပေးရန် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လျှို့ဝှက်စီစဉ်ခဲ့ပုံကို ဆိုရှယ်လစ်များ သိသွားဟန်ရှိသည်ဟု ဗိုလ်ကျော်ဇောက ၄င်း၏ ကိုယ်တိုင်ရေး အတ္ထုပ္ပတ္တိစာအုပ် (စာမျက်နှာ ၁၁၉) တွင် ဗိုလ်အောင်ကြီး၏ ၁၉၈၈ ခုနှစ်ကာလ ဦးနေ၀င်းထံပေးစာများကို ရည်ညွှန်း ကောက်ချက်ချခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မန္တလေးအခြေစိုက်သတင်းသမားများ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်၍ လူထုဟစ်တိုင်ကွင်းကို ဖွင့်လှစ် ပစ်ချခံ MH17 လေယာဉ် ပျံသန်းမှုမှတ်တမ်းတင်စက် ပျောက်ဆုံးနေ
................................... သမီးလေး မစု (အောင်ဆန်းစုကြည်) ကိုမွေးပြီးတော့ အမေကြီးစုဆီကို ဗိုလ်ချုပ်က သမီးကိုချီ မိန်းမမခင်ကြည်ကိုခေါ်ပြီး သွားကြတယ် အောင်ဆန်း ထူးထူးဆန်းဆန်း အမေ့အိမ်ကိုလာတယ်ဆိုတော့ အမေကြီးစုက အံ့သြနေတယ်
အမေကို မြေးမလေးကိုပြ ၊ အမ ကျနော့သမီးလေး ချစ်စရာမကောင်းဖူးလားဗျ လို့ ပဋိသန္ဓာရစကားမဆိုနိုင်ဘဲနဲ့ " အမ ကျနော့သမီးလေးကို ရွှေနားဖူးလေးဆင်ချင်လို့ " လို့တုံးတိတိပြောတယ်
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကို အနုလုံပဋိလုံ လေ့လာသုံးသပ်ပြီးတဲ့သကာလ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများရဲ့ မျှော်လင့် ချက်အားလုံးကို ထမ်းပိုးထားတဲ့
NLD ပါတီကို လေ့လာသုံးသပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး တွေ့မြင်ရ တာကို ပြောရရင်တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သုံးသပ်ခြင်း ဆိုတာက ပိုပြီး မှန်ကန်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ NLD ပါတီဟာ ၀မ်းလေဒီရှိုးနဲ့ ဒိုးနေတဲ့ ပါတီကြီး ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပါပဲ။ Read more »
နိုင်ငံတဝှမ်း အာဇာနည်နေ့ကျင်းပဖို့ မြန်မာအစိုးရ ခွင့်ပြု မလေးရှား လေယာဉ်ပျက်ကျရာ သွားရောက်စစ်ဆေး
> ကြောက်စရာ ယန္တယားကြီး အသက်ပြန်ဝင်လာပြီလား Read more »
ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေးအဖွဲ့၏ကမ်းလှမ်းချက်ကို ဗြိတိသျှတို့ လက်ခံခဲ့ခြင်းမှာ အရှေ့တောင်အာရှမဟာမိတ်တပ်များ၏ စစ်ဦးစီးချုပ် လော့ဒ်မောင့်ဘက်တင် ၏ နိုင်ငံရေးပါး နပ်အမျှော်အမြင်ရှိမှုတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၄၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဗြိတိသျှတို့ ဆုတ်ခွာပြီးနောက် အိန္ဒိယ တွင် အဝေးရောက်အစိုးရရုံးစိုက်ခဲ့ပါသည်။